शेयर बजारमा उत्साह : चार बर्ष पछि नेप्से परिसूचक १७०० माथी , अधिकाङ्स कम्पनी को शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट ? - News21Nepal
शेयर बजारमा उत्साह : चार बर्ष पछि नेप्से परिसूचक १७०० माथी , अधिकाङ्स कम्पनी को शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट ?
news21nepal November 11, 2020
बुधबारको शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरु उत्साहित देखिएका छन् । चार वर्ष पछि नेप्से इन्डेक्स १७०० माथि उक्लिएपछि लगानीकर्ताहरु उत्साहित बनेका हुन् ।
बुधबार नेप्से परिसूचक १.७२ प्रतिशत अर्थात २८.८९ अंकले बढेर १७०७.६८ बिन्दुमा पुगेको छ ।
यसअघि २०७३ कार्तिक २९ गते १७०६.२८ विन्दुमा पुगेकाे थियाे । त्यसबेला ७८ कराेड ९ लाख रूपैयाँ मात्रै काराेबार भएकाे थियाे
यस दिनकाे कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ । बुधबार १९५ वटा कम्पनीको एक करोड २५ लाख ३६ हजार ६५१ कित्ता शेयर किनबेच भएर ४ अर्ब ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार पनि ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
बुधबार कारोबारमा आएका उपसमुहहरुमध्ये ११ वटा उपसमुहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने एउटा उपसमुहको सूचक मात्रै नकारात्मक देखिएको छ । यस दिन फाइनान्स समुहको सूचक बहेक सबै सकारात्मक देखिएका हुन् ।
६ वटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट
बुधबार कारोबारमा आएका ६ वटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस दिन साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशतले बढेको छ भने लक्ष्मी इक्युटी फण्डको इकाई मूल्य पनि ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै नागरिक लगानीको कोष र विशाल बजारको शेयरमूलय ९.९८ प्रतिशतले एनआईसी ग्रोथ फण्डको इकाई मूल्य ९.९० र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ।
आइसीएफसी फाइनान्सको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै ४.७८ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै सेन्ट्रल फाइनान्सको २.८९ प्रतिशत, निर्धन उत्थानको २.८२ प्रतिशत, माउन्टेन हाइड्रो र सप्तकोशि डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य २.४० प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको सबैभन्दा धेरै २५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस्तै हिमालयन डिस्टिलरीको १८ करोड ८६ लाख, एनआइसी एशिया बैंकको १६ करोड ६५ लाख नागरिक लगानी कोषको १५ करोड ४५ लाख र नेपाल लाइफको १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका १०१ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ५३ वटाको घटेको छ । १८ वटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएन।
Tags: अधिकाङ्स कम्पनी को शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट ? शेयर बजारमा उत्साह : चार बर्ष पछि नेप्से परिसूचक १७०० माथी
Previous सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स को लाभांश घोषणा , बोनस र नगद कति ? पूरा हेर्नुस !
Next के तपाईं थोरै लगानी -बाट सेयर बजारमा मनग्य कमाउन चाहनुहुन्छ ? यदि चाहानु हुन्छ भने अपनाउनुस् यी टिप्स।
महिला लघुवित्तले माघ २८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने , शेयर पर्ने संभावना कति ?
February 1, 2021 news21nepal
निफ्राको आईपीओ बाँडफाँड भाग्यमानीले पाए ६० कित्ता शेयर अब यसरी हेर्नुस आइपिओ रिजल्ट
January 29, 2021 news21nepal
शेयर ब्रोकर कमिसन घटाउन अर्थमन्त्री को निर्देशन
December 18, 2020 news21nepal